DOWNLOAD Alpha ဂျက်လေယာဉ် Jaguar ကို FS2004 - Rikoooo
အရွယ် 14.4 ကို MB
downloads ရယူရန္ 19 011
ဤသည်က၎င်း၏ဒါကြောင့်အတိအကျအတောင်ပံ woth အ Jaguar ကိုတိုက်လေယာဉ်၏! ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အောင်မြင်ရန်အများအပြားအတွက် add-ons တွေကိုစုဝေးကြပြီ။ အဆိုပါ panel ကို, ပြည့်စုံသာယာသောနှင့်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသံကိုတညျ့ခဲ့ကြသည်။ ပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့နှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏အများအပြားအတွက်လက်ဆောင်။ အဆိုပါဓါတ်ပုံစုံလင်သောသရုပ်မှန်နှင့်အတူ Tel Aviv ကျော်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အလွန်နေရာလေးကို။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်အံ့ဩ။ ယခုက Download လုပ်!
, လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးအဘို့ - အ Alpha ဂျက်လေယာဉ်ဟာစစ်ရေးလေယာဉ်ဒီဇိုင်းကို Franco-ဂျာမန် (Dornier Dassault Aviation) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 500 တစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကအသုံးပြုယူနစ်နှင့် 1981 ကတည်းက Patrouille de France အဖြစ်အသင်းများအကြောင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ရှေ့ပြေးပုံစံ Jaguar ကိုများထုတ်လုပ်အောက်တိုဘာလ 1966 နှင့်မတ်လ 1967 ခြင်း, Adour စမ်းသပ်မှုခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်သူ၏ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 9, 1968, တပ်မတော်နေ့၏ပြင်သစ်ဝန်ကြီးနှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြင်သစ်လေတပ်နှင့်တော်ဝင်လေတပ်နှင့်ညီမျှ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 400 လေယာဉ်ပျံများအတွက်အမိန့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်ရုံ Jaguar ကို 17 ခုနှစ်ဧပြီလ 1968 အပေါ်ရာအရပျကိုယူ။ သူသည်သူ၏ပထမဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်းသောအခါလက်ရှိနှစ်တွင်, လေယာဉ် Jaguar ကိုအစီအစဉ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်သည်နှင့်ကျောင်း Tactical ဗားရှင်း၏မျက်နှာသာ၌သူ၏ RAF လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်တင်အမိန့်မှေးမှိန်။ 1970 ခုနှစ်, Jaguar ကိုအစီအစဉ်တစ်ဖန်ပြောင်းလဲ: မရှိတော့ RAF လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်လိုလားနှင့်နည်းဗျူဟာလေယာဉ်မှဦးဆောင် Jaguar ကိုချိန်တွယ်။